မန္တလေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ်→Categories မန္တလေး→မန္တလေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	123 >>
Category Archives: မန္တလေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဦးရွှေကြည်ကငါစေတီတော်ရောင်းချခဲ့ (ထို့အပြင်ဦးရွှေကြီးမြင်သာသို့မဟုတ်ရွှေကြည်မြင့်ကကိုခေါ်) 82nd နှင့် 83rd လမ်းများကိုအကြား 24th Street မှာတည်ရှိပါတယ်. It is probably one of the least visited but oldest pagodas in Mandalay having been built by … Continue reading →
Posted in, မန္တလေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
Shwenandaw ကျောင်း (သို့မဟုတ် Shwenandaw ကျောင်းတိုက်) (ရွှေနန်းတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှဘာသာ) 64 အကြား 12 လမ်းအပေါ်မန္တလေးတောင်၏အခြေစိုက်စခန်းမှာသေးငယ်တဲ့သမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ပါသည် & 62ကြိမ်မြောက်လမ်းများကို, near the North East corner of the Royal palace moat … Continue reading →
Kuthodaw စေတီတော် (ထို့အပြင်မဟာ Lawka Marazein Paya ကိုခေါ်) မန္တလေးတွင်မန္တလေးတောင်၏ခွမှာတည်ရှိပြီးတစ်ဦးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါသည်, မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ရတာဟာ. Kuthodaw was built during the 1860’s by King Mindon to house … Continue reading →